बाँके र रूपन्देहीमा गरी थप १७ संक्रमितको मृत्यु- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
बाँके र रूपन्देहीमा गरी थप १७ संक्रमितको मृत्यु
जेष्ठ ११, २०७८ रुपा गहतराज, अमृता अनमोल, माधव ढुंगाना
नेपालगन्ज/बुटवल/भैरहवा — बाँके र रूपन्देहीमा गरी थप १७ जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् ।
बाँकेमा पछिल्लो १५ घण्टामा १० जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार मृतकहरू बाँके, बर्दिया र दाङका छन् । कोहलपुर नगरपालिका–१० का ७१ वर्षीय पुरुषको भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । जेठ ४ गते पीसीआर परीक्षण गरिएका उनलाई त्यही दिन भर्ना गरिएको थियो ।
खजुरा गाउँपालिका–४ की ३२ वर्षीया महिलाको भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । वैशाख २९ गते पीसीआर परीक्षण गरिएकी उनलाई त्यही दिन भर्ना गरिएको थियो । बैजनाथ गाउँपालिका–४ की ३८ वर्षीया महिलाको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको छ । जेठ ५ गते पीसीआर परीक्षण गरिएकी उनलाई ९ गते भर्ना गरिएको थियो ।
कोहलपुरका ४७ वर्षीय पुरुषको भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । वैशाख १९ गते पीसीआर जाँच गरिएका उनलाई ३१ गते भर्ना गरिएको थियो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१८ की ८५ वर्षीया महिलाको भेरीमा मृत्यु भएको छ । वैशाख २८ गते पीसीआर परीक्षण गरिएकी उनलाई जेठ १ गते भर्ना गरिएको थियो ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१२ की ४० वर्षीया महिलाको भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । वैशाख ३० गते पीसीआर परीक्षण गरिएकी उनलाई २१ गते भर्ना गरिएको थियो । बर्दिया, बाँसगढी नगरपालिका–३ का ६५ वर्षीय पुरुषको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको छ । उनलाई जेठ ५ गते भर्ना गरिएको थियो ।
बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–६ की ६० वर्षीया महिलाको भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । उनलाई जेठ २ गते भर्ना गरिएको थियो। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१८ का ५१ वर्षीय पुरुषको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको छ । वैशाख २५ गते पीसीआर गरिएका उनलाई २७ गते भर्ना गरिएको थियो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– ८ का ५६ वर्षीय पुरुषको भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । वैशाख १७ गते पीसीआर गरिएका उनलाई ३० गते भर्ना गरिएको थियो ।
त्यस्तै रूपन्देहीमा थप सात संक्रमितको मृत्यु भएको छ । बुटवलमा दुई र भैरहवामा उपचाररत पाँच जनाले ज्यान गुमाएका हुन् । बुटवलमा मृत्यु हुनेमा एक महिला र एक पुरुष छन् । दुवै जनाको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत थिए । अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमका अनुसार पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–२ का ६५ वर्षीय पुरुषको मंगलबार बिहान ६ बजे मृत्यु भएको हो । कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि उनी सोमबार अस्पताल भर्ना भएका थिए । उनको श्वासप्रश्वासमा समस्या थियो ।
यस्तै, सोमबार साँझ ७ बजेर ५० मिनेटमा कपिलवस्तु नगरपालिका–७ का ३७ वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ । वैशाख ३१ मा भर्ना भएका उनी आकस्मिक कक्ष हुँदै फिबर क्लिनिकमा उपचाररत थिए । अस्पतालका अनुसार उनमा निमोनिया र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या थियो ।
भैरहवामा मृत्यु हुनेमा चार पुरुष र एक महिला छन् । उनीहरू भीम अस्पताल र युनिभर्सल शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत थिए ।
भीम अस्पतालका सूचना अधिकृत डा. नारायण पोखरेलका अनुसार सिद्धार्थनगर नगरपालिका–८ का ५३ वर्षीय, सिद्धार्थनगर–२ का ७८ वर्षीय, रोहिणी गाउँपालिका–५ का ५० वर्षीय र कपिलवस्तु नगरपालिका–१ का ४६ वर्षीय पुरुषको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । युनिभर्सल शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी नवलपरासीको बर्दघाट–१० की ५६ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको अस्पतालका प्रशासन संयोजक तेज केसीले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७८ ०९:२८
८६ वर्षीयाले जितिन् कोरोना
जेष्ठ ११, २०७८ प्रकाश बराल
बागलुङ — ‘माइली आमा’ उमेरले ८६ वर्ष लागिन् । यो उमेरसम्म बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएकी थिइनन् । अहिलेसम्म रोग पनि लागेको छैन । कोरोना संक्रमणले भने उनलाई छाडेन । तर पनि साहस र विश्वासले घरमै बसेर उनले कोरोना जित्न सफल भइन् ।
अमलाचौरकी ८६ वर्षीया माइली आमा । तस्बिर : कान्तिपुर
बागलुङ नगरपालिका–१२ अमलाचौरकी मतिकला आचार्यले २ साताको होम आइसोलेसनबाटै संक्रमण जित्न सफल भएकी हुन् । गाउँमा उनलाई सबैले ‘माइली आमा’ भनेर चिन्छन् । उनले कोरोना जितेको देखेपछि अन्य संक्रमितमा हौसला थपिएको छ । ‘गाउँभरि कोरोना फैलिएको छ भनेर जाँचियो, रोग लागेको छ भनेर डाक्टरले भने,’ उनले भनिन्, ‘मलाई केही भएको थिएन, छुट्टै बसें, निको पनि भएँ ।’ दैनिक तातोपानी र अरू दिनभन्दा धेरै खाना खाएर कोरोना जितेको उनको भनाइ छ । उनमा श्वासप्रश्वासमा समेत समस्या नभएको आचार्यका नाति अरुणले बताए । आत्मबल नै कोरोनाको मुख्य उपचार रहेको आमाले बताइन ।
उनले जीवनमा बिफर, औलोलगायत धेरै महामारी भोगेको बताइन् । कहिले झाडापखालाले गाउँका धेरै बिरामी परे । कतिको ज्यानै गयो । ‘त्यतिबेला पनि धेरै समस्या भएको थियो, घरघरै बिरामी हुन्थे, निस्कनै सकेका थिएनौं,’ उनले पुराना दिन स्मरण गर्दै भनिन्, ‘म भने बिरामी परेकी थिइन ।’ बरु त्यतिबेला पनि बिरामीको स्याहार गरेको उनले बताइन् । वर्षौंदेखि खरानी र माटोले मिचीमिची हात धुँदै आएकी छन् । साबुनपानी र सेनिटाइजर प्रयोग गरेको उनको पहिलो अनुभव हो ।
वैशाख ६ गते उनको पीसीआर गरिएको थियो । १० गते आएको रिपोर्टले संक्रमण देखायो । उनका छोरा ५५ वर्षका डिल्लीप्रसाद पनि संक्रमित थिए । वैशाख २० सम्म आइसोलेसनमा बस्न भने पनि उनी २४ गतेसम्म बसिन् । बरु छोरा डिल्लीप्रसाद बिरामी भए । श्वासप्रश्वासको समस्या आयो । खाना नरुच्ने, स्वाद थाहा नपाउने र शरीर दुख्ने लक्षण देखिए । छिमेकी स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार औषधि खाएर घरमै बसे ।
माइली आमा संक्रमणमुक्त भएको थाहा पाएपछि धौलागिरि अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.शैलेन्द्र पोखरेल गाउँमै भेट्न गए । ‘अहिले पनि घरका छोराबुहारीभन्दा उहाँ टाठी देखिनुभयो, आत्मबलले रोग निको हुने रहेछ भन्ने उहाँको अनुभवले बुझिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘होम आइसोलेसनमा बस्दा स्वास्थ्यको मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्छ ।’ नियमित मास्क लगाउने, शौचालय र भाँडाकुँडा फरक बनाउनेबित्तिकै धेरै सुरक्षित हुने उनले बताए ।
होम आइसोलेसनमा बस्दा माइली आमाले कोरोनाबिरुद्धको पहिलो खोपसमेत लगाएकी छन् । अमलाचौर, पैयुँपाटा र नारायणस्थानमा ३ सय ५० संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसेको स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका कोभिड फोकल पर्सन देवप्रकाश घिमिरेले बताए ।